ကျန်းမာခံတွင်း ညီမျှခြင်း မယွင်းလန်းဖြာ တစ်သက်တာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကျန်းမာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ်ဘပေါ်မှာ အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့တွင် အခြေစိုက်သော “ကမ်ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့” (World Health Organization) ပင် ဖြစ်လေသည်။ အဆိုပါကမ်ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဧပြီလ7ရက်နေ့ကို “ကမ်ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့” အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ကာ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိလေ၏။
ယင်းကိစ္စရပ်သည် လူအများကြားဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထား မြင့်မားပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဒုက္ခပေးနေသော ရောဂါ တစ်မျိုးမျိုး၊ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်လိုအပ်ချက်များ စသည့်အချက် အလက်များကို အခြေခံပြီး ထိပ်တန်းပညာရှင်များ ပါ၀င်သောအဖွဲ့မှ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဤသို့လျှင် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့သော ဆောင်ပုဒ်များအနက် 1994 ခုနှစ်က သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို အခြေခံသတ်မှတ်ခဲ့လေသည်။ အမှန်တွင်လည်း သွားနှင့်ခံတွင်း ကိစ္စရပ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံး၏ပြဿနာဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ယင်းပြဿနာကို ကျား/မ မရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေး၊ လူတန်းစားမရွေးတွင် တွေ့နေရ၏။
သွားနှင့်ခံတွင်း ရောဂါများထဲတွင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထားမြင့်မားသည့် သွားပိုးစားရောဂါ (ဆွေးမြည့်ခြင်း) နှင့် သွားဖုံးရောင် ရောဂါတို့သည် အသက်အန္တရာယ်ကို တိုက်ရိုက်မခြိမ်းခြောက်သော်လည်း လူမှုရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများစွာကို ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်နိုင်လေသည်။
သွားနှင့်ခံတွင်းဟူသည် သီးခြားအင်္ဂါရပ် မဟုတ်ရကား သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ရောဂါများနှင့်ပါ တိုက်ရိုက်တစ်မျိုး၊ သွယ်၀ိုက်၍တစ်ဖုံ ဆက်နွှယ်လျက်ရှိနေလေသည်။ နိုင်ငံတကာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ် Federation Dental International (F.D.I) သည် နှစ်စဉ်သင့်လျော်သည့် ရက်ကို ရွေးချယ်ကာ “ကမ်ဘာ့သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးနေ့” (World Oral Health Day) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိလေသည်။ မူလက နိုင်ငံတကာ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ်ကို စတင်တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာချားဂေါ်ဒွန်၏ မွေးနေ့ဖြစ်သော စက်တင်ဘာလ 12 ရက်ကို သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ယင်းနေ့သည် နိုင်ငံအတော်များများတွင် ညီလာခံများကျင်းပချိန်ဖြစ်နေသောကြောင့် အားလုံးအဆင်ပြေမည့် ရက်ကိုရွေးချယ်ရန် စီစဉ်ကြလေသည်။
2012 ခုနှစ် ဟောင်ကောင်၌ ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာ ညီလာခံမှကမ်ဘာ့သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးနေ့အဖြစ် နှစ်စဉ် မတ်လ 20 ရက်နေ့ကို သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနေ့ရက်ကို အတိုကောက်ရေးမည်ဆိုပါကလ၊ ရက်အတိုင်း စီစဉ်အရ3လပိုင်း 20 ရက်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဆိုပါလျှင် 3.20 ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဤတွင် ရှေ့ဆုံးကိန်းဂဏန်းသည် 32 ဖြစ်ပြီး ကြီးသွားအချောင်းရေကို ဖော်ညွှန်း ကာ နောက်ပိုင်းကိန်းဂဏန်း 20 သည် ကလေးသွားအရေအတွက်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ထို့အပြင် 20 ဟူသည် သက်ကြီးပိုင်းများတွင် ကျန်ရှိနေသင့်သည့် သန်မာကြ့ံခိုင်သော သွားအချောင်းရေလည်း ဖြစ်၍နေပါ သည်။ နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းသုည (0)သည် လူတိုင်းသွားဆွေးမြည့်ခြင်း လုံး၀မရှိစေရဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်ယူပါသည်။
နိုင်ငံတကာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့ချုပ် (F.D.I) သည်လည်း နှစ်စဉ်ဆာင်ပုဒ်များကို ထုတ်ပြန်လေ့ရှိရာ ယခု 2016 ခုနှစ်အတွက်ဆောင်ပုဒ်မှာ “It all starts here. Helathy Month, Healthy Lifes” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို သင့်တော်သလို ပြန်ဆိုရပါက -
“ကျန်းမာခံတွင်း ညီမျှခြင်း၊ မယွင်းလန်းဖြာ တစ်သက်တာ” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်စင်စစ် အထက်တွင်ရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်း သွားနှင့်ခံတွင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဆက်စပ်နေရကား သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာမှခန္ဓာကိုယ်လည်း လန်းဖြာပြီး ဘ၀တစ်သက်တာအတွက် စိတ်ချရပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ် မည်သို့မည်ပုံ ဆက်စပ်နေသည်ကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြသရန် လိုအပ်လာပါသည်။
1. နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်း
ခံတွင်း၌ ဗက်တီးရီးယားအမျိုးပေါင်း 700 ခန့်ပေါက်ဖွားကျင်လည်လျက်ရှိရာ ယင်းတို့အနက် အချို့သည် သွေးကြောများ အတွင်း အဆီ၊ အခဲသဏ္ဌာန် ပိတ်ဆို့ပြီး နှလုံး၊ ဦးနှောက်စသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်ကာ နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်း အစရှိသည့် ရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။
2. အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်း
ခံတွင်းသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်နေရကား ခံတွင်းရှိ ဗက်တီးရီးယားများသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း သို့ အချိန်မရွေး၀င်ရောက်နိုင်ပြီး အဆုတ်လေပြွန်ရောင် အစရှိသည့် ရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
3. အဆစ်အမျက်ရောင်ရောဂါများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်း
အဆိုပါ ခံတွင်းရှိ ဗက်တီးရီးယားများသည်ပင် သွေးကြောများမှတစ်ဆင့် အဆစ်အမျက်များသို့ ရောက်ရှိပြီး လေးဖက်နာ အစရှိသည့် အဆစ်အမျက်ရောင်ရမ်းသည့် ရောဂါများကို အခြေအနေပိုမို ဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။
4. သွေးချို၊ ဆီးချိုရောဂါများနှင့် ဆက်စပ်နေခြင်း
ခံတွင်းရောဂါ (အထူးသဖြင့်သွားဖုံးရောင်ရောဂါ) များသည် ဆီးချိုရောဂါနှင့် ဆက်စပ်နေလေ့ရှိပေသည်။ အချို့သူတို့သည် သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းကို သေချာစွာ စစ်ဆေးကြည့်မှသာ မိမိသွေး၌သကြားဓာတ်များနေကြောင်း သိရှိရသော သာဓကများစွာရှိလေသည်။
5. အစာလမ်းကြောင်းရှိရောဂါများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်း
ခံတွင်းသည် အစာလမ်းကြောင်း၏ တံခါး၀ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာသွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများကြောင့် အစားအစာကောင်းစွာ ချေဖျက်နိုင်ခြင်းမရှိရကား ယင်းကို အစာလမ်းကြောင်း (အထူးသဖြင့် အစာအိမ်) မှ ပိုမိုကြီးလေးသော တာ၀န်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် နဂိုအစာအိမ်ရောဂါ အခံရှိနေသူများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်။
6. မိခင်လောင်းများ မူမမှန်ကလေးမွေးဖွားခြင်း
သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းသည့် ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်များသည် ကလေးမွေးဖွားသည့်အခါ ပေါင်ချိန်မပြည့်၊ လမစေ့သော ကလေးများ မွေးဖွားသောပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရလေသည်။
တစ်ဖက်ကလည်း သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အစားအစာ၊ အမူအကျင့်များသည် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေး ကိုပါ ထိခိုက်စေတတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။ အထူးသဖြင့် အချိုလွန်ကဲသော အစားအစာများသည် သွားများကို ဆွေးမြည့် ပျက်စီးရုံမျှမကဘဲ ဆီးချို၊ သွေးချိုနှင့်တကွ ယင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ် စသော ရောဂါများကိုပါ ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ မှားယွင်းသော အမူအကျင့်ဖြစ်သည့် ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် သွားမျက်နှာပြင်ပျက်စီးပြုန်းတီးခြင်း၊ သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ပွားစေခြင်းသာမက ကင်ဆာအကြိုနာများဖြစ်ပွားကာ နောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်စေသော ကင်ဆာရောဂါအထိ ကြီးကျယ်နိုင်လေသည်။ ထို့အပြင် ကွမ်းစားသုံးမှုများပြားသူများသည် ကွမ်းယာတွင်ပါ၀င်သော ထုံးများကြောင့် ဆီးအိမ်၊ ကျောက်ကပ်တို့တွင် ကျောက်တည်သောရောဂါ ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေနိုင်ပြန်ပါသည်။ အလားတူ ပင် ဆေးလိပ်၊ အရက်သောက်ခြင်းများကြောင့် အဆုတ်၊ အသည်းတို့တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေသည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက် စေနိုင်လေသည်။
သို့ဖြစ်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေရသည်ဖြစ်ရကား ပုံမှန်သွားနှင့်ခံတွင်း ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည့် စနစ်မှန်သွားတိုက်ခြင်း၊ အချိုစာ လျှော့စားခြင်းနှင့် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ခြင်းစသည်တို့ကို နေ့စဉ်မပြတ် ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပေတော့သည်။
Vol: 13, No: 36, 15-6-2016